Dodocool DA158, हामी हेराई रद्द हेडबैंड हेडफोन | ग्याजेट समाचार
रुबेन गेलार्डो | | समीक्षा
आदर्श रूपमा, जब हामी हाम्रो मनपर्ने हेडफोनको साथ संगीत सुन्दछौं, हामी परिवेशको आवाज सुन्न सक्षम छैनौं। केहि समयको लागि त्यहाँ बजारमा विभिन्न मोडेलहरू छन् जुन यो टेक्नोलोजी हो जुन एक्रोनिम एएनसी अन्तर्गत चिनिन्छ (सक्रिय शोर नियन्त्रण)। यो सत्य पनि हो कि हेडब्यान्ड हेडफोन जुन यस प्रविधि प्रयोग गर्दछ त्यसको उच्च मूल्य हुन्छ। अझ बढी, यस क्षेत्रमा केही मान्यता प्राप्त ब्रान्डहरू छन् जुन प्राय: मनपर्ने विकल्पहरू हुन्।
यद्यपि उनीहरूले ईन-हेडफोन बेच्ने प्रवृत्ति राख्दछन् - खास बटन वालेहरू - केहि बर्षदेखि उनीहरूको दैनिक यात्राको लागि हेडब्यान्ड मोडलहरू प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू भेट्टाउन गाह्रो छैन। तसर्थ, तिनीहरू मध्ये धेरै ताररहित छन् र एनएफसी वा ब्लुटुथ जस्ता प्रविधि प्रयोग गर्छन्। र उत्तरार्द्धमा, हामी केहि हप्ताहरूको लागि केही ताररहित मोडेलहरू परीक्षण गर्दैछौं, राम्रो फिनिश र ध्वनिको साथ, जसका आवाज रद्द छन् र यसको मूल्य १०० युरो भन्दा कम छ। यो बारेमा छ Dodocool DA158.
1 Dodocool DA158 प्याकेजि and र सामान
2 डिजाइन र सामग्रीको गुणस्तर
3 जडानहरू र नियन्त्रणहरू
4 ध्वनि र आवाज रद्द
5 सम्पादकको राय: हेडफोन पैसाको लागि मूल्य र अधिकको लागि
6 Dodocool DA158 को पेशेवर र विपत्ति
Dodocool DA158 प्याकेजि and र सामान
जब हेडफोन जाँचको लागि आइपुग्दा, जब हामीले उनीहरूको शिपिंग प्याकेजिंगबाट बाहिर निकाल्दछौं तब हामी एकदम धेरै समावेश भएको बाकस भेट्टाउँछौं। हामीले सोच्यौं कि उनीहरू गलत थिए। यद्यपि हामीले पछि यो आकारको कारण के हो भनेर पत्ता लगायौं। बक्स जसमा उनीहरू प्रस्तुत गरिन्छन् राम्रो गुणको कार्डबोर्डबाट बनेको छ र कालो डिजाइनको सिल्हूटको साथ Dodocool DA158 यसमा कोरियो।
भित्र हामीले भेट्टायौं सानो हेराइको केस जुन हेडफोन भित्र लुकाउँदछ। र यहाँ वर्णन गरिएको थियो: ओभर-इयर हेडफोनहरू फोल्ड गर्न योग्य हुन्छन् ताकि तिनीहरू अधिक यात्रामा यस यात्रामा आरामसँगै बोक्न सक्दछन् जुन डोडोकुलहरूलाई हिट लिनबाट रोक्दछ।
साथै, केस भित्र, हेडफोन र विशिष्ट वारेन्टी र निर्देशन पत्रकहरू बाहेक, यो पनि एक भित्री पकेट हुन्छ जुन वेल्क्रोसँग बन्द हुन्छ र लुक्छ एक चार्जिंग केबल र एक केबल एक परम्परागत तरिकामा हेडफोन प्रयोग गर्न सक्षम हुन; त्यो हो, mill. mill मिलिमिटर ज्याक मार्फत।
डिजाइन र सामग्रीको गुणस्तर
को Dodocool DA158 केवल एक छाया मा उपलब्ध छन्: गाढा खैरो, जुन म्याट कालोको लागि पूर्ण रूपमा गलत हुन सक्छ। हामीले तपाईलाई भनेको छु, यो हेडब्यान्ड हेडफोनको बारेमा हो। र यी सकेसम्म सहज हुनको लागि, दुबै हेडब्यान्ड र दुई हेडफोनहरू धेरै नरम हुनुपर्दछ। र हामीले तपाइँलाई अवगत गराउनुपर्दछ कि एक पटक तिनीहरू ठाउँमा भए पछि तिनीहरू धेरै सहज छन्, यदि तपाइँसँग उनीहरूलाई एक घण्टा भन्दा बढी छ भने।
अर्कोतर्फ, यी कुनै पनि हेड साइजमा पूर्ण रूपले अनुकूलन गर्न सकिन्छ, दुबै हेडफोनहरू सार्न सक्षम हुन पक्षमा दुईवटा रेलहरू छन् र यसरी तिनीहरूलाई आवश्यकताको आधारमा समायोजन गर्दछ। थप रूपमा, हामीलाई मनपर्ने एउटा पक्ष विस्थापन केही गाह्रो छ, त्यसैले हो हामीले चिन्ता लिनुपर्दैन कि हामीले प्रयोग गर्ने स्थितिमा हामी फरक पर्दछौं। अवश्य पनि, हामी यो जान्दैनौं कि समयको साथ यो केहि खेलमा लिन्छ र यो कडाई हराउनेछ।
Dodocool DA158 हार्ड प्लास्टिक बाट बनेको छ एल्युमिनियममा केहि तत्वहरूको साथ। हामीले भोग्नु परेको भावना यो हो कि तिनीहरू राम्रा गुणस्तरका सामग्रीहरू हुन्, कुनै प्रकारको पातलो र प्रयोगको साथ टुक्रने वस्तुको साथ।
जडानहरू र नियन्त्रणहरू
यी Dodocool DA158 परम्परागत ओभर-ईयर हेडफोनको रूपमा कार्य गर्न सक्दछ; त्यो हो, 3,5. mm एमएम ज्याकमा वा ब्लुटुथ जडान मार्फत जडान। पहिलो केसमा तपाईले यसको बिल्ट-इन ब्याट्री प्रयोग गर्नुपर्दैन; दोस्रो केसमा, र समझदारीको रूपमा, यसले तपाईंको ब्याट्रीको क्षमता प्रयोग गर्दछ।
हामीले मनपराएको कुरा के हो भने एक पटक हामीले यसलाई हाम्रो मोबाइल-आईफोन र एन्ड्रोइड- सँग पेयर गरेपछि, यो स्क्रिनको माथि देखा पर्नेछ। एउटा नयाँ आइकन जसले स्वायत्ततालाई जनाउँदछ जुन हामीले यी हेडफोनमा छोड्छौं, उदाहरणका लागि हामी सडकमा हुँदा असन्तुष्ट हुनबाट जोगिनका लागि केहि धेरै उपयोगी छ।
अर्कोतर्फ, Dodocool DA158 को दाहिने ईयरबडमा शारीरिक नियन्त्रण छ। त्यहाँ हामी भोल्यूम र ट्र्याक नियन्त्रणहरूको रूपमा साइड अफ / अफ / पेयरि button बटन फेला पार्नेछौं। हामीले भन्नै पर्छ ट्र्याकहरू पार गर्न सक्षम हुन हामीले केही सेकेन्डको लागि भोल्युम बटनहरू थिच्नु पर्छ। र होइन हामीले यसलाई सहज महसुस गर्यौं। र धेरै कम छिटो। यदि तपाईं असफल हुन्छौं जब कुञ्जी स्ट्रोकको साथ हामी संगीत, पोडकास्ट, इत्यादिको भोल्युम फरक पार्नेछौं। सबै समयमा। यस बीचमा, यदि हामी यही हेडसेट फ्लिप गर्दछौं हामीसँग ध्वनी रद्द प्रणालीलाई सक्रिय / निस्क्रिय गर्न स्विच उपलब्ध हुनेछ.
अन्तमा, तल हामी दुबै माइक्रोयूएसबी पोर्ट पत्ता लगाउँदछौं यसले ब्याट्री चार्ज गर्नका लागि यसलाई एकीकृत गर्दछ, र mm. mm एमएम ज्याक यसलाई केबलद्वारा प्रयोग गर्नका लागि। धेरै चार्जिंग केबलको रूपमा package.mm एमएम डबल ज्याक केबल बिक्री प्याकेजमा संलग्न छ.
ध्वनि र आवाज रद्द
म भन्ने छैन कि म कुनै ध्वनि विज्ञ छैन। त्यसकारण, मेरो कान मैले चाहेको जस्तो प्रशिक्षित छैन। यद्यपि यी Dodocools को साथ म ब्लुटुथ जडान मार्फत ध्वनि वास्तव मा राम्रो लाग्छ कि प्रमाणित गर्न सक्षम भयो। म बजारमा अन्य मोडेलहरू परीक्षण गर्न सक्षम छु र तिनीहरूलाई वायरलेस वा केबल मार्फत प्रयोग गर्ने बीचको भिन्नता अतुलनीय थियो। यस अवस्थामा, त्यहाँ भिन्नता अझै छ तर यदि तपाईंले भिन्न मोडेलहरू चलाउनुभएन भने तपाईंले भिन्नता त्यति धेरै महसुस गर्न सक्नुहुन्न।
अर्कोतर्फ, यी Dodocool DA158s द्वारा प्रयोग गरिएको आवाज रद्द वास्तवमै उपयोगी छ। यदि तपाइँ अझै टेक्नोलोजी सक्रिय गर्नुहुन्छ जब तपाईं अझै संगीत बजाउनुहुन्न र वातावरणमा पर्याप्त मौन हुन्छ, तपाईंले आफ्नो धारणामा परिवर्तन देख्नुहुनेछ; छ जस्तो कि बाहिरी आवाज हरायो र मानौं तपाईको कानले खाली शटडाउन गरिरहेको छ। तपाईलाई बताउन - र अतिशयोक्ति बिना - कि तिनीहरू मसँग आए जब मैले हेडफोन लगाएको थिएँ र म अर्को व्यक्ति सुन्न असमर्थ थिए।
अन्तिम तर कम्तिमा होइन, यी हेडफोनहरू स्पष्ट रूपमा मोबाइल उपकरणहरूको प्रयोगमा केन्द्रित छन्। र यदि तिनीहरू स्मार्टफोनहरू छन् भने उत्तम। किन? ठिक पनि किनभने तिनीहरूसँग अन्तर्निहित माइक्रोफोन छ र हामी तिनीहरूलाई ह्यान्ड-फ्रि प्रयोग गर्न सक्छौं। अरू के छ, पावर बटनले हामीलाई ह्या hang्ग अप गर्न मद्दत गर्दछ - आगमन कलहरू लिन।
सम्पादकको राय: हेडफोन पैसाको लागि मूल्य र अधिकको लागि
तपाईं यी हेडफोनको साथ संगीतको मजा लिनुहुनेछ; ध्वनी स्पष्ट र शास्त्रीय संगीत वा OST हो - म यस प्रकारको संगीतको साथ परीक्षण गर्न रुचाउँछु - स्पष्ट ध्वनि र राम्रो गुणको साथ। त्यस्तै, यी Dodocool DA158 लगाउन धेरै सहज हेडफोन छन्। र यो आंशिक रूपमा राम्रो कोमलता को लागी धन्यवाद छ जुन यसका सबै भागहरूमा छ।
हामीले तपाईलाई भनेको छु कि त्यो हुन सक्छ सुधार गर्न सकिने एक मात्र चीजमा सहारा बिना नै ट्र्याक परिवर्तन मुद्दा हुनेछ स्मार्टफोन o ट्याब्लेट। जे होस्, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईको छिटो हुन चाहानुहुन्छ भने तपाईको विकल्प बन्नेछ। अन्यथा, कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।, तपाईंलाई निमन्त्रणा गर्नुहोस् तिनीहरूलाई लिन र € १€० भन्दा बढीको विकल्पहरूमा जानु पर्दैन।
को समीक्षा: रुबेन गेलार्डो
Dodocool DA158 खरीद गर्नुहोस्
Dodocool DA158 को पेशेवर र विपत्ति
बोकेको केस पनि सामेल छ
ब्लुटुथको माध्यमबाट राम्रो आवाज
ब्याट्री स्थिति नियन्त्रण गर्न स्मार्टफोनमा प्रतिमा
ट्र्याकहरू पास गर्न नियन्त्रण गर्नुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » Dodocool DA158, हामी हेराई रद्द हेडबैंड हेडफोन समीक्षा गर्दछौं